Kuunyana-Mahara Sutu Kuisa-kumusoro | Martech Zone
Chitatu, Kurume 5, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Pano ndinogara mukamuri yehotera muMilwaukee, Wisconsin. Chikwata chedu chiri kuendesa kune imwe kambani kumusoro kuno mangwana uye kudzokera kuIndipolis. Ndakatenga sutu nyowani yerwendo - yanga iri kutengeswa kweinosvika 70% kubviswa uye ini handina kukwanisa kuipfuudza. Iyo chokoreti brown - ingangoita nhema - uye yakasununguka. Ini handina kutenga sutu mumakore akati wandei saka ndakazvibata kune chipfeko chose - kusanganisira shangu dzinotsvedza.
PaMidway Airport ndakapinda mukutaurirana nemumwe mufambi uye ini ndikataura kuti sutu yangu yaive yakazara mubhegi rangu rekutakura. Iye mukomana haana kutenda kuti ndaive nesutu muhombodo yangu.
Muchokwadi, ini ndaive nerwendo rwangu rwese mu Messenger Bag - shanduko yenguvo, laptop, magazini, nezvimwewo ndaipfeka slip pamashangu ekupfeka nejean rangu saka ndaitaridza semunhu akanaka mufambi - zvaingova kuchengetedza nzvimbo. Uye - ivo vanotsvedza-saka ndinogona kuzviita kuburikidza nekuchengetedzeka nekukurumidza. Iyo Yenyaya Logic Messenger Bhegi Ndine kamuri rakapetwa kumashure iro MacBookPro yangu inokwana zvakakwana, saka ini handidi kukanganisa kukanganisa kwangu kurongedza laptop!
Pandaigara muDenver, ndakatarisa ratidzo yemangwanani apo mukomana airatidza kumonera sutu kuti iite isina kuunyana. Vafudzi vanowanzo kuunza hombodo hombe kana kupeta. Dambudziko nderekuti hombodo yehembe inopetwa, uye kuipeta kunokonzera kuunyana. Kana iwe ukamonera sutu yacho nemazvo, iwe unomedza usina kuunyana zvachose uye unogona kuikwana mune chero chinhu.
Ini ndiri mukomana muhombe - saka unogona kufungidzira kuti ingani nzvimbo sutu fanira simuka neni.
Tambanudza Up Bhurugwa rako
Kumonora bhurugwa rako, iva nechokwadi chekuti mabhurugwa akaradzikwa nemabhurugwa padivi pavo uye tumakwara twakaita mudungwe kuti mabhurugwa anyatsotsetseka. Kutanga muchiuno, kumonera mabhurugwa zvakatsvinda kusvika ave mune yakanaka roll. Uzviise muhomwe yako kana mukwende mukona yakapfava maisazokwikwidzwa.
Tambanudza Up Yako Bhachi
Kupeta jekete rako kunotora zvishoma fesese. Iwe uchazoda kukotama zvinyoro, kwete kupeta :), bhachi rako kuti udzore mapendekete kumashure kuti azvibate. Nenzira iyi, chero peta inoitika yakananga pakati pemusana uye inotaridzika yakasikwa. Nyoronyoro isa maoko acho diagonally pasi rimwe divi rejekete. Iwe haudi kuapeta zvakanyanya sekukotamisa iwo. Kupera kwesleeve kunofanira kukwira pasi pebhatani repasi pajekete.
Kutanga pabendekete, putsa bhachi kumusoro - asi ita shuwa kuti hausi kuunyana paunenge uchienda. Inofanira kuumba mukobvu wakakora kupfuura bhurugwa rako, asi icharamba iri mukufamba! Usapinze zvinhu muhombodo yakatenderedza, ingoisa imomo nemasokisi, hembe yepasi, nezvimwe pamusoro.
Kuburitsa Yako Sutu
Ukangosvika kwauri kuenda, ita shuwa kuburitsa bhegi, kusunungura sutu, uye ndokuturika. Iwe unofanirwa kuiwana iri mumamiriro akakwana! Ndine urombo handina mifananidzo inoenderana - ini ndiri munzira chaimo saka nhare mbozha kamera haingoitema.
ONA: Ini handiratidzike kunge ndine rombo rakawanda nehembe dzekupfeka - ini ndinowanzo kumisa simbi pahotera.
Tags: erik qualmankusetsaMobile Anwendungmobile friendlymobile optimizationnharembozhaParodyumbooqualmansocial media shanduko
Kanganwa iwo matipi nezve zviri nani mabhurogu kana akasiyana mawijeti eiyo WordPress kunyorera, ichi chaicho ruzivo runobatsira! 🙂
Doug, ndinoda mafashoni nemasutu, rako rinonzwika jazzy, rakakodzera sei? Ini ndinowana zvakawanda zvezvinhu zvangu zvakagadzirwa, ndiri 6ft2in uye 260 lbs. Murume wehunyanzvi hwako haafanire kunge aine masutu asingasviki matatu akanaka ebhizinesi, blazer rebhuruu, jasi jira, grey matete uye nhema, uye chipfeko chehudyu chaizvo chemazuva ako anopisa, Chinhu chakapetwa, ndinofanira kugutsikana
Kuravira kwangu mune zvipfeko kwakapfuura bhajeti rangu rekuzvitenga, JD! Iyi sutu haina kubviswa pa rack - saka ini ndoda kuiwana kuti ive yakasona. Hembe dzacho dzinenge dzakareba kwazvo, asi zvimwe zvese zvakanaka. Ini ndinoshuvira kuti masiraidhi ave nesilining lining, yangu imwe sutu ine izvi uye zvakanaka kupfeka kupfuura yehembe yejean.
Iyo roll up inoshanda! Ndino vimbisa 🙂
Iwe aimbova murume wemauto, iwe! Ndakadzidza ichi chihomwe chekutakura pandakanga ndiri kunze kweCA ndichishanyira shamwari yangu yepamoyo yaive yakamira ipapo panguva iyoyo. I was packing my bag kuti ndiende kumba and zvakamusvota chaizvo. Akatora ndokumonera hembe dzangu dzese uye dzakazoguma dzakaringana munenge chetatu yenzvimbo yandakanga ndatora. Ini ndinofunga chiri chinhu chemauto b / c ivo chete vanhu vandinoziva vanorongedza nenzira iyi vangave vari muchiuto kana vane simba rakadaro muhupenyu hwavo.
Zvisinei, ini ndakapeta nekuumburuka zvese kubvira. Ini ndinogara ndichiuya ndisina kuunyana (anova mana ehupenyu hwangu) uye yakawanda nzvimbo yemamwe masundries. Nguo dzekupfeka, zvakadaro, hongu, dzinofanirwa kazhinji kubatwa kumusoro nedare.
Yakanaka posvo, uye yakakosha ruzivo kuve nayo semunhu bhizinesi.
Ndinofanira kunge ndichikwegura… kumashure muzuva rangu yaive 'peta & stow'. Isu hatina kumonera chero chinhu, asi pakanga paine mabhureki mune hembe kubva pakapetwa! Ini ndichiri kupeta matauro sezvandakaita muBoot Camp uye handigone kumira nawo akapetwa chero zvakasiyana. Suwa!
Unofanirwa kuyedza kukwenya sutu uye uone kana ichishanda zvirinani pane iyo sutu pack yandinoshandisa izvozvi. Chinotevera chinonyengera - kuendesa mahembe kwandaienda vasina iwo kutaridzika senge ndakarara maari. Chero matipi eizvozvo, chero ani?
Ini ndinotenga hapana-simbi shati kubva kune nyika dzinopera ndodziumburudza. Kana paine chero kuunyana kana kupaza, imwe swipe yesimbi yakakwana. Kana ndikaziva kuti ndichapfeka bhachi, ini handina kana basa nekuayina. Izvo zvisikwa zvinobuda mukati memaminitsi makumi matatu kana ndakapfeka bhachi resutu.
Jun 23, 2009 pa1: 21AM
imwe nzira - dhonza ruoko rumwe rwejaketi mukati kunze, uye enderera kuitira kuti uve nefudzi rimwe chete mukati. Isa rimwe ruoko kuburikidza neruoko rwekunze. Mapfudzi anofanira kuiswa. Wobva wamonera bhachi.
Brooks hama makwinya mahembe akasununguka ndiwo akanakisa - haawedzere kuunyana.